रासस जेष्ठ १४, २०७७ बुधबार
भारतले कहिले सीमाक्षेत्रको नेपाली भूमि कब्जा गर्ने गरेको छ त कहिले अनधिकृत तवरले सिमानामा बाँध बनाएर नेपाली जमीनलाई डुबाउने गरेको छ । यति मात्र होइन, नेपाल सरकारको अनुमति नै नलिई भारतीय सीमारक्षक बलका बर्दीधारी प्रहरी नेपालको भित्री भागसम्म घुसेका कैयाँैंं घटना छन् । लामो समयदेखि देखा परिरहेको यस्तो मिचाहा प्रवृत्तिविरुद्ध नेपाली जनता आन्दोलित रहँदै आएका हुन् । यस्तो आन्दोलनको आह्वान र नेतृत्व गर्नेमा खासगरी...
गोरखापत्र अनलाइन , जेष्ठ ९, २०७७ शुक्रबार
गोरखापत्र अनलाइन , जेष्ठ ८, २०७७ बिहीबार
नेपालको अद्यावधिक नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिरहँदा कस्तो अनुभूति भइरहेको छ ? इतिहासमा थाती रहेको समस्यालाई सम्बोधन गर्दै नेपालको सबै भूगोल समेटिएको ऐतिहासिक नक्सा सार्वजनिक गर्न पाउँदा अत्यन्त गौरवान्वित भएकी छु । खुसीले सीमा नाघेको छ । यसको श्रेय नेपाली जनता, राजनीतिक पार्टीहरू, म आबद्ध नेकपा, पार्टीका अग्रज नेता, मलाई मार्गनिर्देशन गर्नुहुने प्रधानमन्त्रीमा आभार प्रकट गर्न चाहन्छु ।
गोरखापत्र अनलाइन , बैशाख २५, २०७७ बिहीबार
इटाली विश्वकै दोस्रो उत्कृष्ट स्वास्थ्य प्रणाली छन् । उत्कृष्ट स्वास्थ्य प्रणालीका लागि स्वास्थ्य, स्वास्थ्य असमानता, प्रतिक्रिया र स्वास्थ्य उपचारका लागि हुने खर्च जस्ता तत्वमा आधारित रहेर निर्धारण गरिन्छ ।
गोरखापत्र अनलाइन , बैशाख २४, २०७७ बुधबार
कोरोना सङ्क्रमणले आम मानिसको जीवनशैली र आय आर्जन मात्र होेइन देशको अर्थतन्त्रमा समेत नराम्रो धक्का लागेको छ । वार्षिक वृद्धिदर, उत्पादन तथा रोजगारी जस्ता अर्थतन्त्रका प्रायः सबै आयाम खलबलिएका छन् । सीमित साधन स्रोतबीच अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सरकार जुट्नुपर्ने चुनौतीसँगै सरकारसँग नागरिक र निजी उद्यमी व्यवसायीका अपेक्षा पनि बढेका छन् । यसै सन्दर्भमा प्रस्तुत छ सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका अर्थ, सञ्चार तथा...
गोरखापत्र अनलाइन , बैशाख ८, २०७७ सोमबार
भावनात्मक बनेर नेपाल फर्कने हठ देखाउनु भन्दा सुरक्षित बसौं
गोरखापत्र अनलाइन बैशाख ६, २०७७ शनिबार
एकै पटक लाखौंको संख्यामा नेपालीहरू नेपाल पुग्दा सरकारले कसरी ब्यबस्थापन गर्ने ? नेपाल सरकारले सोच्ने बिषय हो ।
रासस बैशाख २, २०७७ मंगलवार
मुख्य रुपमा हाम्रो काम भनेको नीति निर्माण भए पनि विपद्मा जनतालाई सचेत गराउने, सरकारको काम कारबाहीमा सहयोग पु-याउने नै भएकाले पनि त्यो हाम्रो कर्तव्य थियो । विपद्सँग जुध्न प्रेरित गर्ने कुरा नै महत्वपूर्ण हो, यतिखेर । सुरक्षाकर्मी र चिकित्सकले अहोरात्र खटेर काम गर्नुभएको छ । उहाँहरुलाई हौसला दिने र प्रोत्साहित गर्ने काम भएको छ । त्यस आधारमा हेर्दा पनि प्रतिक्रिया सकारात्मक नै आएको छ ।
पहिलो कुरा, हामीले नेपाल, भारत र नेपाल चीनबीच सिमानाबाट हुने आवतजावतलाई बन्द गरेका हाँै । यस विषयलाई सबैले एउटै रूपमा बुझ्नुपर्दछ । हामीले मानिसको आवतजावत बन्द गरेको हो । मालसामान ल्याउने विषय जानकारीमा, निगरानीमा सहज रूपमा नै हुनुपर्छ । यो निर्णय सरकारलाई नेतृत्व गर्ने पार्टीको हितमा या कुनै सेक्सनको हितमा गरिएको होइन, सिंगो राज्यको हितमा, आमनेपाली जनताको हितमा र हामी सबैको हितमा गरिएको हो । आजको आवश्यकताले दिशानिर्देश...
'कडा निर्णय लिने स्थिति नआओस्, आ–आफ्नो कर्तव्य बोध गरौँ'
रासस चैत्र १८, २०७६ मंगलवार
गोरखापत्र अनलाइन , चैत्र १८, २०७६ मंगलवार
चीनको हुवेई प्रान्तको राजधानी वुहानमा ३१ डिसेम्बर २०१९ मा पहिलोपटक देखिएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण अहिले विश्वव्यापी भइसकेको छ ।
गोरखापत्र अनलाइन , चैत्र ६, २०७६ बिहीबार
कोभिड–१९ (कोरोना) भाइरस सङ्क्रमणको जोखिमका बेला दैनिक उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव हुने मनोवैज्ञानिक त्रासमा जनता छन् । यसलाई कतिपय व्यापारी व्यवसायीले जनताको मनोवैज्ञानिक त्रासको उपयोग गर्दै वस्तु लुकाउने वा कालोबजारी गर्ने प्रवृत्ति पनि छ । बजारमा वस्तुको अभाव नहोस् र कालोबजारी नियन्त्रण होस् भनेर सरकारले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरेको छ । उपभोग्य वस्तुको यथार्थ अवस्था, आपूर्ति प्रणालीमा देखिएको...
गोरखापत्र अनलाइन , चैत्र ३, २०७६ सोमबार
चपला, अवला, बलाधिकारी, धनी, गरिब– सबै हिँड्ने, गुड्ने सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ । धुलाम्मे, हिलाम्मे सडक । सके सडकमै नत्र सडकपेटीमा फोहोरका थुप्रा ।